‘पिंजडा ब्याक अगेन’ प्रोमो : तान्ला दर्शक ? « Ramailo छ
‘पिंजडा ब्याक अगेन’ प्रोमो : तान्ला दर्शक ?
समय : 3:42 pm
निखिल उप्रेती स्टारर फिल्म ‘पिंजडा ब्याक अगेन’को प्रोमो रिलिज गरिएको छ । मंगलबार आयोजना गरिएको प्रोमो लञ्च प्रेसमिटमा अभिनेता उप्रेती भने उपस्थित थिएनन् । निर्देशक हिमाल केसी, नायिका सारा शिर्पाली, निर्माता श्रीराम बराल लगायत टिम प्रेसमिटमा उपस्थित थिए । प्रोमो यस्तो बनेको छ :
माघ ४ गते प्रदर्शन हुने पिंजडा ब्याक अगेन को ट्रेलर कर्मसियल छ । एक्सन, कमेडी, रोमान्स, विछोडको भाव ट्रेलरमा महसुश गर्न सकिन्छ । मौनता श्रेष्ठको लेखन रहेको फिल्ममा निर्देशक हिमाल केसीको द्धन्द्ध निर्देशन तथा सौरभ लामाको छायाँकन । निखिल र सारासँगै पुकार भट्टराई, ज्याक श्रेष्ठ, भोलाराज सापकोटा र कुशाग्र भट्टराई लगायत कलाकारहरुले ‘पिंजडा ब्याक अगेन’मा अभिनय गरेका छन् ।
फिल्म निर्माणमा रमेश सुवेदी, बाबुराज सिंह, बसन्त शर्मा, सुशान्त श्रेष्ठ, रोहित पुरी, गोविन्द गैरे र चन्द्र बहादुर खत्रीले सहकार्य गरेका छन् ।